Dadka Beijing Kusoo Laabanaya Oo La Karantiilayo 14-maalmood | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Dadka Beijing Kusoo Laabanaya Oo La Karantiilayo 14-maalmood
Dadka Beijing Kusoo Laabanaya Oo La Karantiilayo 14-maalmood
Beijing ayaa waxa ay amartay in qofkasta ee ku soo laabanaya caasimadda uu is karantiilo muddo 14-maalmood ah amaba uu wajihi doono ciqaab, arrintan oo ah tallaabadii ugu dambaysay ee lagu xakamaynayo caabuqa cusub ee dilaaga ah ee coronavirus, warbaahinta dowladda ayaa sidaas ku warrantay. Dadka deegaanka ayaa waxaa loo sheegay “inay is karantiilaan ama ay tagaan xarumo dadka lagu karantiilo” marka ay dib ugu soo laabtaan caasimadda Shiinaha fasaxa kaddib.
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii ay Masar xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus ah ee lagu arko qaaradda Afrika In ka badan 1,500 oo qof ayaa u dhimatay caabuqaasi, kaas oo ka soo bilowday magaalada Wuhan.
Ogaysiiska ayaa waxaa Jimcihii soo saaray kooxda ka hortagta caabuqaasi ee Beijing xilli dadka magaaladaas ay dib uga soo laabanayaan fasaxii sanadka cusub ee Lunar kaas oo ay ku soo qaateen qeybaha kale ee waddanka Shiinaha.
Fasaxa ayaa la dheereeyay sanadkan si gacan looga gaysto in lagu xakameeyo cudurka In ka badan 20 milyan oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin magaalada Beijing Golaha Qaran ee Caafimaadka Shiinaha ayaa Sabtidii waxa uu sheegay in 143 qof ay dhinteen, taas oo tirada dhimashada ka dhigtay 1,523. Afar qof ma ogiyee dhammaan dadkaasi waxa ay ku dhinteen gobolka uu cudurku halakeeyay ee Hubei.
2,641 oo qof oo cusub ayaa la xaqiijiyay in caabuqu uu ku dhacay taas oo tirada dadka cudurkaasi qaba ka dhigaysa 66,492 Goobaha ka baxsan dhulwaynaha Shiinahana waxaa la soo tabiyay 500 oo kiis oo lagu arkay 24 dal, saddex qof ayaa goobahaasi ku dhintay: mid Hong Kong ayuu ku dhintay, midna Philippines kan kalana Japan.